China Anti-static conductive vinyl mpempe akwụkwọ factory na suppliers | Linsu
1. ESD homogeneous vinyl floor nwere na-adịgide adịgide mgbochi static ọrụ n'ihi na ọ na-eji conductive static network kpụrụ na interface nke plastic ahụ tinyere ndị nkịtị homogeneous vinyl n'ala arụmọrụ dị ka waterproof, ire ọkụ retardant, eyi na-eguzogide ọgwụ, ụda absorption, chemical-eguzogide wdg
2. PVC mgbochi static akwakọba ala, mgbe ọ na-ala ma ọ bụ jikọọ ọ bụla ala nwere ebe, na-enyere ndị electric ụgwọ a ga-agbasasị. Ihe eji mara ya bu iguzogide ike nke 10 nke 2 na nke ike 9 oh oh. A na-eji polyvinyl chloride resin eme PVC ala a na-emechi emechi emechi ka ihe dị mkpa dị ka isi ahụ, ndị na-emepụta plastik, ndị na-edozi ahụ, ndị na-ekpo ọkụ, ihe ndị na-eduzi ihe na ndị na-ejikọ njikọta sitere na usoro mmụta sayensị, usoro polymerization na usoro ịkpụzi thermoplastic, yana mmekọrịta dị n'etiti PVC ahụ bụ ọkụ Static eletrik netwọk, na-adịgide adịgide mgbochi static ọrụ. Ala ahụ dị ka mabul ma nwee mmetụta dị mma nke ịchọ mma. Okwesiri maka nkwukọrịta, microelectronics, ụlọ ọrụ kọmputa na-achịkwa ụlọ ọrụ kọmputa, ụlọ kọmputa, ala ntanetị, ịdị ọcha na ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ ziri ezi na akụrụngwa. Ihe nkedo bụ ihe nano nwere arụmọrụ arụmọrụ. Ihe na-eduzi ihe na-asọ site na elu elu ruo na ala ala. Nhazi a na-ekpebi ịdịgide adịgide nke arụmọrụ mgbochi; ihe eji eme ya bu ihe eji eme ka ihe na-adighi nma, nke nwere njirimara nke iguzogide ihe ndi ozo, ire oku na ndi na adighi nma Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ihe eji achọ ụlọ mma nke na-ewu ewu n'ụwa taa, nke a makwaara dị ka "ihe eji eme ahụ nke ọkụ". Uru nke PVC mgbochi static coiled n'ala ihe mara mma, nwere ike inye ọtụtụ agba maka ndị ọrụ ịhọrọ; na-agbanwe, ezi ụkwụ na-eche; na-eyi nguzogide, obere uzuzu ọgbọ, nsogbu na-eguzogide na ire ọkụ retardant; eguzogide corrosion, adịghị ike acid eguzogide, adịghị ike alkali eguzogide. A nwalere ngwaahịa a maka arụmọrụ arụmọrụ tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ wee zute ụkpụrụ ogo.
2m * 20m homogeneous ESD vinyl n'ala mpịakọta
6mm * 6mm homogeneous vinyl tile
A na-anwale ihe ndị ahụ na-emepụta ngwaahịa ahụ tupu mgbe emechara ya, na-agbaso ụkpụrụ ogo.
Njirimara Ọkọlọtọ Nkeji Nsonaazụ
Cover Marenal mkpuchi ISO 10581-EN 649 Mpempe akwụkwọ di na nwunye
onye isi ezeM
Ebumnobi GB 8624-2012 klas Nkechi
Ileghara nguzogide DIN 51130 otu R9
Ọnụ ike dị omimi nke esemokwu EN 13893 klas DS
Mpempe akwụkwọ obosara
Mpempe akwụkwọ ogologo
Yiri nguzogide EN 649 otu T
Akụkụ nkwụsi ike
Agba ngwa ngwa ISO 105-B02 ogo > 6
Iguzogide nsị EN 423 Enweghị nsị 0
Gbagọrọ agbagọ eguzogide GB / T 11982 2-2015 enweghị mgbape
Antibacterial ISO 22196 Klas otu
Ihe mgbochi ayodiin Ọ dị mma
klas 23 nnukwu ọrụ
klas 34 nnukwu ọrụ
klas Ọrụ dị arọ 43
Anti-static n'ala na-ebe etinyere electronic kọmputa ụlọ, ọcha ụlọ, ime mgbanwe ụlọ, n'ichepụta ụlọ ọrụ nke na kọmputa ngwaọrụ, noo nke microelectronic ụlọ ọrụ, asepsis ụlọ, Central contchịkwa ụlọ, na noo nke chọrọ ọcha na electronic àmà. A na-eji ya ugbu a na ụlọ akụ, post ọfịs, ụgbọ okporo ígwè, ọgwụ, na ụlọ ọrụ microelectronic.
600000 square mita na-eguzo ebuka, 24000 square mita mmepụta kwa ụbọchị.
A na-akwadebe ala anyị nke ọma, iji hụ na ebufere ngwongwo n'ọnọdụ dị mma.
Ekwesịrị itinye ala ESD na-arụ ọrụ na Sub floor ndị emechiri emezi, larịị ma nwekwa mgbawa, Ikike ịdị ala kwesịrị ịdị n'okpuru 2.5% nwalere ya na CM Dumb test. Taịlị, nrapado na saịtị ntinye kwesịrị iru ọnọdụ okpomọkụ nke opekata mpe 18 ma ọ dịkarịa ala 24 awa tupu echichi.
Nke gara aga: Ngwa ngwa ulo
Osote: PVC ala